Ticjụ okwukwe na Hexen: Etu esi egwu egwuregwu "ụlọ akwụkwọ ochie" na GNU / Linux? | Site na Linux
Ticjụ okwukwe na Hexen: Etu esi egwu egwuregwu "Old School" na GNU / Linux?
Ọzọkwa, taa anyị ga-abanye na «Gamer ụwa» karịsịa nke ụdị egwuregwu "Old School" lee ka anyị si amasị ndị nke anyị toro, mana anyị tolitere iso ha na-egwuri egwu, yana ụfọdụ ndị na-eto eto nwere mmasị «Ochie egwuregwu». Ya mere, taa ntụgharị maka egwuregwu dị ka Jụrụ okwukwe na Hexen.
"Mbibi, jụrụ okwukwe na Hexen" bụ akụkụ nke ogologo ndepụta nke egwuregwu dị ka "Old School", nke na-ewetara anyị ọtụtụ agụụ na ncheta ncheta. Na na anyị nwere ike iso na-egwu egwu na GNU / Linux site na mmemme nke ime ma ọ bụ nchịkọta dị na nchekwa dị ka "Chocolate Rome", ma ọ bụ mpụga dị ka "Doomsday Ngini".
Tupu mmiri abanye isiokwu nke otu esi egwu na GNU / Linux egwuregwu dị ka "Mbibi, jụrụ okwukwe na Hexen" mediante "Chocolate Rome" y "Doomsday Ngini", anyị ga-ahapụ ozugbo obere ndepụta nke gara aga metụtara posts na anyị na-akwado ịgagharị, iji gbasaa ohere nke egwuregwu nke ụdị a na anyị Mgbasa ozi:
"GZDoom bụ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri 3 dị ugbu a nke ZDoom, nke bụ ezinụlọ nke ọdụ ụgbọ mmiri kachasị mma nke Mberede Engine maka igbu na sistemụ arụmọrụ nke oge a. Pgbọ mmiri ndị a na-arụ ọrụ na Windows, Linux, na OS X nke oge a, na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ anaghị ahụ na egwuregwu nke Id Software bipụtara na mbụ. Enwere ike iji kesaa ọdụ ụgbọ mmiri ochie ZDoom na kesara n'efu." Mbibi: Etu esi egwu egwu Rome na ụdị egwuregwu FPS ndị ọzọ yiri GZDoom?
1 Mbibi, Heretic na Hexen na Doomsday Engine na Chocolate Mbibi
1.1 Gịnị bụ mbibi, jụrụ okwukwe na Hexen Games?
1.2 Ngwa iji gbaa ụdị egwuregwu Old School
1.2.1 Omsbọchị Doomsday
1.2.2 Chocolate Rome
Mbibi, Heretic na Hexen na Doomsday engine na Chocolate Rome
Gịnị bụ mbibi, jụrụ okwukwe na Hexen Games?
Maka ndị nwere ike amaghị ma ọ bụ cheta ihe ha kwuru egwuregwu ochie, anyị ga-enye obere nyocha, iji tinye onwe anyị n'ọnọdụ:
"Mbibi bụ egwuregwu vidiyo nke Id Software mepụtara na 1993. Mbibi mbụ gbara ọsọ n'okpuru sistemụ arụmọrụ DOS. Egwuregwu ahụ gụnyere ịme ka mmiri mmiri nke na-adịkarị na ọdụ na Phobos, otu n'ime ọnwa nke Mars. Na nke abụọ, ọnụ ụzọ ámá nke Hel na-emeghe, na-ahapụ ọtụtụ ndị mmụọ ọjọọ, ndị mmụọ na-adịghị ọcha, zombies, nke na-emetụta ntọala ahụ n'ime oge awa. Omume ahụ bụ naanị mmadụ dị ndụ na ọdụ ahụ na ọrụ ahụ bụ ime ka ọ dị ndụ site na ọkwa ruo n'ọkwa (dịka na Wolfenstein 3D)." Mbibi na Rome wiki fandom
"Ticjụ okwukwe (Heretic na Bekee) bụ egwuregwu na-aga nke ọma nke fantasy na omume, nke Raven Software zitere na Disemba 23, 1994, n'ihi mkpakọrịta nke abụọ ya na id Software mgbe Shadowcaster. Dabere na injin mbugharị gbanwere, Onye jụrụ okwukwe bidoro iwebata usoro ihe eji eme ihe n'oge, emesịa bụrụ ebe nkịtị na ụdị FPS. Id Software bipụtara egwuregwu ahụ n'okpuru akara ha." Jụrụ okwukwe na ahụhụ Wiki fandom
"Hexen: Beyond Heretic (ma ọ bụ nanị Hexen) bụ ochie fantasy Fps (Onye mbụ shooter) video egwuregwu mepụtara Raven Software, bipụtara id Software na kesara site Warner. E wepụtara ya na Ọktoba 30, 1995. O doro anya na ihe na-aga n'ihu na Heretic, ka ha na-ekerịta otu eluigwe na ala na ụfọdụ akụkụ nke akụkọ a, ọ bụ ezie na ọ na-ewere ọnọdụ na ụwa ọzọ." Hexen na mbibi Wiki fandom
Ngwa iji gbaa ụdị egwuregwu Old School
Igbu egwuregwu dị ka "Old School" banyere GNU / Linux anyị nwere ọtụtụ nhọrọ, ụfọdụ amaworị dị ka GZDoom, na ndị ọzọ erubeghị Ochie. Mgbe anyị ga-enyocha 2 ọzọ, nke bụ:
Ụbọchị Doomsday engine
Dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, "Doomsday Ngini" a kọwara ya n'ụzọ dị nkenke:
"A n'ọdụ ụgbọ mmiri nke Rome, Heretic na Hexen na mma ndịna."
Maka gị ibudata, nwụnye na iji anyị dị nnọọ ibudata gị faịlụ nhazi na usoro .deb site na Budata ngalaba maka GNU / Linux. Wụnye ya ngwa ngwa site na CLI ma ọ bụ GUI interface, jiri usoro na mmemme mara ama. Iji na-agba ọsọ ya, ọkacha mma site na ngwa menu. Ozugbo emechara ya ma bido, naanị ihe anyị ga - egosi bụ ebe anyị nọrọ .wad ma ọ bụ .pk3 faịlụ nke egwuregwu anyị dabere na Mbibi, Heretic na Hexen, ebudatara ma ọ bụ nweta n'ụzọ ọ bụla.
para ozi ndị ọzọ banyere "Doomsday Ngini" ị nwere ike ịga leta gị ukara website na GitHub.
Dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, "Chocolate Rome" a kọwara ya n'ụzọ dị nkenke:
"Gbọ mmiri nke Mbibi nke ji ikwesị ntụkwasị obi na -emepụta ahụmịhe Mbibi, dịka a gbara ya na 90.
Maka gị ibudata, nwụnye na iji ị nwere ike ibudata gị faịlụ isi na usoro .tar.gz site na Budata ngalaba. Otú ọ dị, na nke anyị anyị arụnyere ya site na ọnụ (console), dị ka na-atụ aro site na gị Nwụnye ngalaba na GNU / Linux.
Ebe ọ bụ na, anyị na-emebu Weghachite Linux akpọ Ọrụ ebube GNU / Linux, nke dabere na MX Linux 19 (Debian 10), nke ahụ ewulitela na-eso nke anyị «Na-eduga na Snapshot MX Linux» ọ gụnyere ya n’ebe nchekwa ya.
Ozugbo arụnyere, ọ ga-eme ya site na ọnụ na-egosi ebe anyị kwadoro na .wadị faịlụ nke egwuregwu anyị dabere na Mbibi, Heretic na Hexen, ebudatara ma ọ bụ nweta n'ụzọ ọ bụla.
para ozi ndị ọzọ banyere "Chocolate Rome" ị nwere ike ịga leta gị ukara website na GitHub.
Na nchịkọta, anyị nwere ike ịchọpụta ruo ugbu a, nke ka bụ ọtụtụ n'ime nostalgic na fun «Old School» ụdị egwuregwudị ka "Mbibi, jụrụ okwukwe na Hexen", n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, na-adị ma na-egwu egwu ọ bụghị naanị na Windows, kamakwa na nke ugbu a Sistemụ arụmọrụ na-emeghe ma na-emeghedị ka GNU / Linux. Ọbụghị naanị na mmemme dị n'ime ma ọ bụ ngwugwu dị na nchekwa dị ka "Chocolate Rome", ma dị ka mpụga dị ka "Doomsday Ngini".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ticjụ okwukwe na Hexen: Etu esi egwu egwuregwu "Old School" na GNU / Linux?
Musique: Emeghari ohuru na ihe egwu egwu nke GNU / Linux